Anarana Lionel Andrés Messi Cuccitini
Teraka 24 jona 1984
Asa : mpilalao baolina kitra
Lionel Messi dia mpilalao baolina kitra teratany argentina, teraka tao Rosaria Argentina tamin'ny 24 Jona 1987, ary milalao ao amin'ny klioba FC Barcelona sy amin'ny ekipam-pirenena argentina. C´ le fill du Antón Romero Messi
Heverina ho anisan'ireo mpilalao mahay indrindra teo amin'ny tantaran'ny baolina kitra izy satria izy irery ho hany mpilalao nahazo ny Ballon d'Or efatra taona nifanesy, ny taona 2009 ka tramin'ny 2012.
Maro no zava-bita tsara indrindra vitan'i Lionel Messi: izy no nahafaty baolina be indrindra teo amin'ny fifaninanam-pirenena La Liga any Espana; izy no mpilalao nahafaty baolina be indrindra tao anatin'ny taona iray (91 ny baolina matiny tamin'ny 2012); ary izy no nahafaty baolina be indrindra tamin'ny Ligue de Champions any Eoropa tao anatin'ny taom-pilalaovana iray, (14 ny baolina matiny) miaraka amin'ilay teratany portigey Cristiano Ronaldo sy ilay italiana José Altafini. Maro ny amboara efa azon'i Lionel na tao amin'ny klioba FC Barcelona, na tamin'ny ekipam-pirenena.
Tao amin'ny FC Barcelona izy dia inenina nahazo ny tompon-dakan'i Espana, indimy tompon-dakan'ny ekipa tompon'ny amboara, indroa nahazo ny Coupe du Roi, intelo tompon-dakan'ny Ligue de Champions any Eoropa, ary indroa nahazo ny amboara eran-tany ho an'ny klioba.
Tao amin'ny ekipam-pirenena Argentina kosa izy dia tompon-daka eran-tany ho an'ny lasaky ny 20 taona (2005), tompon-daka olimpika tany Beijing (2008), ary tafakatra tamin'ny lalao famaranana ho tompon-dakan'ny Amerika Atsimo (Copa America 2007). izy koa no mety hahazo ny ballon d'or 2014-2015
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Lionel_Messi&oldid=796714"
Dernière modification le 1 Febroary 2017, à 22:46
Voaova farany tamin'ny 1 Febroary 2017 amin'ny 22:46 ity pejy ity.